Views | News Filmy
यसै साता पोष्ट ग्राजुएशनको अनर प्राप्त गरेकी अभिनेत्री केकी अधिकारीको बिषयमा एउटा आर्टिकल सार्वजनिक भएको छ । सेतोपाटी डटकमका पत्रकार अशेष अधिकारीको शब्द बनोटमा तयार भएको स्टोरीले तपाईलाई धेरै ठाउँमा प्रेरणा पनि दिन सक्छ । पछिल्लो जेनेरेशनमा सर्वाधिक अध्ययन गर्ने हिरोइनको रुपमा परिचित केकीले आफ्नो पारिवारिक समस्याका बीच कसरी सफलता हासिल गरिन् ? पढ्नुस् सेतोपटी डटकमबाट read more
चलचित्र बिकास बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष राजकुमार राईले पुरानो एक ब्यवस्था परिवर्तन गर्दै थप नयाँ नियमलाई संशोधन सहित लागु गरेका छन् । आज आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका तर्फबाट राईले पाँच बुँदे योजनायोजना तथा निर्णय सार्वजनिक गर्दै फिल्म उद्योगलाई सुधार्न यी योजनाले सहयोग गर्ने अठोट ब्यक्त गरेका थिए । यस्तै उक्त पत्रकार सम्मेलनमा आउँदो कात्र्तिक १ read more
‘मलाई माफ गर म तिमी जस्तो महान बन्न सकिन’ : सुरेश दर्पण पोखरेल
June 6, 2015 3:15 am
फिल्म उद्योगमा पत्रकार र सेलिब्रेटी बीच फेरी एक पटक झगडाको वातावरण देखिएको छ । केही फिल्म पत्रकार र निर्देशक सुरेश दर्पण पोखरेल बीच परेको फेसबुक भनाभनले अर्कै रुप लिन थालेपछि चलचित्र पत्रकार संघले एक विज्ञप्तीनै जारी गरि झगडाको वातावरण साम्य बनाउँने प्रयाश गरेको छ । पत्रकार दीप विमलीले गरेको उजुरीका आधारमा चलचित्र पत्रकारसंघले एक विज्ञप्ती read more
करिब तीन महिना अगाडि ‘रेशम फिलिली’ फिल्मको एउटा गीत रिलिज भयो, ‘जालमा….’। गीत रिलिजसँगै भाइरल बन्यो। रातारात चुलिएको गीतको चर्चाले फिल्मको चर्चा पनि उस्तै गरि बढ्यो। फिल्म एकाएक नेपाली दर्शकका लागि प्रतिक्षित बन्यो। सबैलाई फिल्म रिलिजको मिति छिट्टै आइदियोस् भन्ने चाहाना बढ्यो। कारण गीत जत्तिकै फिल्म पनि राम्रो बनेको अनुमान थियो। भलै गीत राम्रो हुँदैमा read more
खै कहाँबाट शुरू गरौं मेरो मनको भावना। मेरी प्यारी अनुको यादले मन पिरोलिरहेको छ। बेचैन छु उनीसँग बिताएका ती पलहरू सम्झेर। आज उनी यस धर्तीमा छैनन्, तर यो संसारको कुनै पनि कुनामा बसेर अझै पनि मलाई पर्खिएर बसेकी छिन् कि जस्तो लाग्छ। उनको यादमा रातदिन तड्पिएर बसेको छु उनी फेरि आउँछिन् कि भनेर। विगतमा उनीसँग read more
‘कन्जुमर साइकोलोजी’ जसले बुझ्छ उसले नै ‘कन्जुमर’लाई बढीभन्दा बढी सामान बेच्न सक्छ र बजारमा ऊ नै सफल ठहरिन्छ। फिल्म व्यापारको सफलता र असफलताको कडी पनि त्यसमै अडेको हुन्छ। आजका मितीमा जति पनि नेपाली फिल्म शुक्रबार पर्दामा झुल्किन्छन् तिनको झुल्काई करिब करिब बिजुली चम्काईको निमेषभरको उपस्थिति जस्तै हो। शुक्रबार रिलिज भएको फिल्मले आइतबार नदेख्ने र कतिपय read more
‘महिनाको एक करोड तलबमा खर्च हुन्छ। तर, वार्षिक १८ करोड तलबमै सकिन्छ, कसरी? मलाई पनि थाहा छैन।’ केही दिनअघि नेपाल टेलिभिजनको कार्यालय पुग्दा अध्यक्ष नीर शाहले भने। सरकारी संस्थानको बेहाल त सबै ठाउँमा छ। तर, शाह स्थापना गर्दा पनि नेपाल टेलिभिजनको प्रमुख थिए, अहिलेपनि छन्। उनी नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष मात्र होइनन्। नेपालको पहिलो टेलिभिजनकर्मी पनि read more